Multi-functional Imveliso Line - China Shijiazhuang Zhongtai Pipe
Olu hlobo lokusila unako ukuvelisa umbhobho ngeenxa zonke, isikwere kunye eziziingxande umbhobho kunye ezinye abroach abandayo wasusa kwesigaba
1) ZTF Technology Ndiyila Isetyenziswa ekuveliseni Round Pipe
2) ngqo Square Ndiyila Technology ekuveliseni Square & okoxande Pipe
3) Khupha Amalungu Of Abroach Cold asongwe Section Steel
1) ZTF Technology Ndiyila Isetyenziswa In ukudla ing Round Pipe
√ Musa ufuna ukutshintsha ababu- kwicandelo nokwaphuka, ukonga iindleko 60% kwi izileyi
√ mqengqeleki ixesha ukutshintsha uyagawulwa kakhulu, akuyomfuneko icandelo breakdown ukutshintsha ngumngundo nokulinganisa nje kulungile. Kwaye usike-phantsi ukuvelisa ixesha.
√ ngamandla Khulula yabasebenzi.
√ Roll zakha ubugcisa, ubukhulu yahlukile kwaye lwayo strip sentsimbi X70, N80.
√ I-strip sobhedu egqwethekileyo yaye beared ngakumbi ngokusezingqondweni, ukunciphisa miri phakathi zephetshana kunye roller, kwaye kananjalo nokunciphisa nkcitho isondo.
√ Kulula ukubuyisela nokulinganisa roller.
2) ngqo Square Ndiyila Techn yokuvavanya In ukudla ing Square & okoxande Pipe
√ Thelekisa ne ngeenxa kwi isikwere kunye noxande ndlela bokwakha, ngale ndlela ingcono kuba ukumila ekupheleni kwecandelo umnqamlezo, ngokwentelekiso, semi-sangqa arc esingaphakathi amancinci, kwaye udini uthe tyaba, akubonakali rhoqo.
√ umthwalo line lonke iphantsi, ingakumbi iinxalenye isiphathi.
√ Ububanzi strip sobhedu encinane malunga 2.4-3% ngaphezu ngeenxa kwi isikwere & uxande, oko Unokugcina kudla izinto ekrwada.
√ It ukuzivumelanisa multi-point ayeguqa ndlela, ukuphepha amandla yezihlunu lingonakali icala, ukunciphisa inyathelo kusekwe gama ukuqinisekisa umgangatho, elingumthombo ngayo ukunciphisa inkcitho amandla roller lingonakali.
√ It ukulungelelanisa edityanisiweyo uhlobo isondo phezu uninzi nqwelo, kuba ndiyaqonda ukuba isethi mqengqeleki unako ukuvelisa inqwaba isikwere kunye noxande umbhobho kunye nemigaqo ezahlukeneyo, oko ukunciphisa ezingoovimba roller, libya iindleko malunga nama-80% kwi mqengqeleki, ugcine bankroll imali, elifutshane ixesha yoyilo imveliso entsha enye.
Simple abroach abandayo liqengqiwe steel ezifana abunjwe ngqo intsimbi channel, C intsimbi ezimilise, ezimile Z sentsimbi.
Qaphela: Sinako bayile kwaye kuveliso umatshini wokwenza umbhobho ngokweemfuno zabathengi '.
Previous: Abroach Cold asongwe Icandelo Steel Production Line
Next: Isantya esiphakamileyo Pipe Mill
Tube Automatic Welding Machine
Oluzenzekelayo welding Steel Pipe
Roll Cold Ndiyila Matshini Ngokuba welding Pipe
Ubuninzi welding Pipe Line
Pipe Welding Ukwenza Machine
Stainless Pipe Production Li ne
Weld Pipe Roll Machine Ndiyila
welding Pipe Equipment
nge welding Pipe Ukwenza Machine
Segesi Machine Owenza
segesi Pipe Making Machine